ဖေါ်ပြချက်:Check Valves, ရေ Check Valves, ကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်, သန့်ရှင်းရေးစစ်ဆေးရန်အဆို့ရှင်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > အဆို့ရှင် > Check Valves
Check Valves ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Check Valves, ရေ Check Valves ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
နီကယ်အမြန် connector ကိုချထားတဲ့  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အမြန် connector ကို plating နီကယ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နီကယ်ချွတ်စစ်ဆေးမှုများအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Tee MALE ကြေးဝါကိုစစ်ဆေး Valve  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပူရောင်းအားစစ်ဆေးခြင်းအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အရည်အသွေးမြင့်စစ်ဆေးမှုများအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Tee MALE စစ်ဆေးမှုအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သံမဏိ filter ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပူပြင်းတဲ့ရောင်းစစ်ဆေးမှုများအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hot sale သောကြေးဝါ Check Valves  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Filter နှင့်အတူမိုက်မဲသောအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သံမဏိ filter နှင့်အတူကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးဝါနွေ ဦး ပေါက်စစ်ဆေးခြင်းအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးဝါမီးသတ်အဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အတုကြေးဝါ Y ကို - ပုံစံစစ်အောင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးပြုမှုအတုကြေးဝါ Swing စစ်ဆေးရေးအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CW617 အတွက်အတုကြေးဝါလွှဲစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Solder Ends နှင့်အတူကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အတုကြေးဝါလွှဲ Check Valve  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နီကယ်အမြန် connector ကိုချထားတဲ့
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား: 16 bar မှ 25 bar...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မမှ2လက်မမှ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည်။ အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား: 16 bar မှ 25 bar...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မမှ2လက်မမှ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား: 16 bar မှ 25 bar...
Tee MALE စစ်ဆေးမှုအဆို့ရှင်
အရွယ်အစား: ၁၁/၂ လက်မမှ ၂ လက်မအထိ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အမည်ခံဖိအား: 16 bar မှ 25 bar မှ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မမှ2လက်မမှ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အမည်ခံဖိအား: 16 bar မှ 25 bar မှ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110...
Filter နှင့်အတူမိုက်မဲသောအဆို့ရှင် ART.8709 မိုက်မဲသောအဆို့ရှင် နှင့်အတူ အရွယ်အစား: မှ3/ €4â€ ?? To2â€
ကြေးဝါနွေ ဦး ပေါက်စစ်ဆေးခြင်းအဆို့ရှင် ART.8707 ကြေးဝါနွေ ဦး Check Valves အရွယ်အစား: 1/2 မှ "To4" မှ ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ - ကြေးဝါအဆို့ရှင်များ၊ သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်: 1.6 mpa ရေအလုပ်လုပ်ဖိအား0င်မှ...
အတုကြေးဝါလွှဲစစ်ဆေးမှုအဆို့ရှင်သောကြေးဝါအဆို့ရှင် ART.8703 အရွယ်အစား: 1 / မှ 2â€ ?? 4â€ရန် ?? နည်းပညာဆိုင်ရာစံ ၁.၆ mpa ရေ၊ မဟုတ် causticity အရည်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောရေနွေးငွေ့အလုပ်လုပ်သောဖိအား အနုတ် 20 ကနေပေါင်း 100 ℃အလုပ်လုပ်အပူချိန်မှ...
အတုကြေးဝါလွှဲစစ်ဆေးမှုအဆို့ရှင်ကြေးဝါအဆို့ရှင် KS-7030 ကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင် အရွယ်အစား: 1 / မှ 2â€ ?? 4â€ရန်...
တရုတ်နိုင်ငံ Check Valves ပေးသွင်း
ဘောလုံးစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင် သည်စစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်ဖြစ်ပြီးစီးဆင်းမှုကိုပိတ်ဆို့ရန်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောအပိုင်းဖြစ်သောပိတ်ထားသောအဖွဲ့ဝင်သည်လုံး ၀ ဘောလုံးဖြစ်သည်။ အချို့သောဘောလုံးစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်များတွင်၎င်းကိုပိတ်ထားရန်အတွက်ဘောလုံးသည်နွေ ဦး ပေါက်နေသည်။ နွေ ဦး ပေါက်မရှိသောဒီဇိုင်းများအတွက်ဘောလုံးကိုထိုင်ခုံဆီသို့ရွှေ့။ တံဆိပ်ခတ်ရန်ပြောင်းပြန်စီးသည်။ ဘောလုံးစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်များ၏အဓိကထိုင်ခုံများ၏အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်သည်ဘောလုံးကိုထိုင်ခုံသို့လမ်းညွှန်ရန်နှင့်ပြောင်းပြန်စီးဆင်းမှုကိုရပ်တန့်သောအခါအပြုသဘောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေရန် conically-tapered သို့မဟုတ် ပို၍ နည်းသည်။
ဘောလုံးစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင် များသည်များသောအားဖြင့်အလွန်သေးငယ်သော၊ ရိုးရှင်းပြီးစျေးပေါသည်။ ၄ င်းတို့ကိုအရည်သို့မဟုတ်ဂျယ်လ် minipump dispenser spigots၊ ပက်ဖြန်းကိရိယာများ၊ လေကိုဖိအားပေးရန်ရာဘာမီးသီးများစသည်တို့တွင်အသုံးပြုသည်။ manual air pumps နှင့်အခြားပန့်များနှင့်ပြန်လည်ဖြည့်စွက်နိုင်သောဆေးထိုးပြွန်များတွင်သုံးသည်။ ဘောလုံးများကိုများသောအားဖြင့်သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ကြသော်လည်း၎င်းတို့သည်အခြားပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အထူးပြုလုပ်ထားသောပတ္တမြားများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ မြင့်မားသောဖိအားမြင့် HPLC ပန့်များနှင့်အလားတူအသုံးချမှုများသည်မာကျောမှုနှင့်ဓာတုခံနိုင်ရည်ရှိမှုအတွက်ဘောလုံးနှင့်ထိုင်ခုံနှစ်ခုလုံးပါသောအသေးစားဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်ဘောလုံးစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်များကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ကြာရှည်စွာအသုံးပြုပြီးနောက်၊ ထိုကဲ့သို့သောအဆို့ရှင်များသည်နောက်ဆုံး၌ဟောင်းနွမ်းသွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်ထိုင်ခုံသည်အက်ကြောင်းဖြစ်လာပြီးအစားထိုးရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ထိုကဲ့သို့သောအဆို့ရှင်များကိုအစားထိုးနိုင်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်မြင့်မားသောဖိအားကိုခံနိုင်ရည် ရှိ၍ စုပ်စက်၏ ဦး ခေါင်းအတွင်းသို့လွဲချော်နေသောသတ္တုပစ္စည်းတပ်ဆင်မှုအတွင်း၌တင်းတင်းကျပ်ကျပ်တပ်ဆင်ထားသောပလတ်စတစ်ကိုယ်ထည်ငယ်လေးတွင်ထားရှိသည်။
အလားတူစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်များသည် disc သည်ဘောလုံးမဟုတ်သော်လည်း၊ အခြားနွေရာသီမှအားဖြည့်ပေးသော poppet ကဲ့သို့သောအခြားပုံသဏ္shapeာန်များလည်းရှိသည်။ ဘောလုံးစစ်ဆေးမှုအဆို့ရှင်များကိုဘောလုံးအဆို့ရှင်များနှင့်မရောထွေးသင့်ပါ။ ၎င်းသည်မတူညီသောအဆို့ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဘောလုံးကိုရပ်တန့်ရန်သို့မဟုတ်စီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ထိန်းချုပ်နိုင်သောလည်ပတ်အဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။
အ မြှေးပါးစစ်ဆေးမှုအဆို့ရှင် သည်ပုံမှန်အားဖြင့် - တံခါးပိတ်အဆို့ရှင်ကိုဖန်တီးရန်နေရာချသောရာဘာအမြှေးပါးကိုအသုံးပြုသည်။ အပေါ်ဘက်ခြမ်းရှိဖိအားသည်စီးဆင်းမှုကိုဖွင့်ရန်အတွက်စစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်ဖွင့်ရန်အတွက်ဖိအားကိုမတူညီသောလူပုဂ္ဂိုလ်ပမာဏဖြင့်အောက်ဘက်ခြမ်းရှိဖိအားထက်သာလွန်ရမည်။ အပြုသဘောဆောင်သောဖိအားရပ်တန့်သွားသည်နှင့်အမြှေးသည်မူလတံခါးပိတ်နေရာသို့အလိုအလျောက်ပြောင်းသွားသည်။
Swing Check Valve သို့မဟုတ် tilting disc Check Valve ဆိုသည်မှာ Check Valve ဖြစ်ပြီး၊ စီးဆင်းမှုကိုပိတ်ဆို့ရန်အတွက်ဖြစ်စေ၊ စီးဆင်းမှုကိုပိတ်ဆို့ရန်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောအစိတ်အပိုင်း၊ ပတ္တာတစ်ခုသို့မဟုတ်လည်ပင်းပေါ်သို့လှည့်သည်ဖြစ်စေစီးဆင်းမှုသို့ပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ရှေ့စီးစီး ၀ င်ခြင်းကိုထိုင်ရန်ထိုင်ခုံပေါ်သို့ပိတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထိုင်ခုံဖွင့်လှစ်မှုအပိုင်းသည်ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုအကြားသို့မဟုတ်ထောင့်တည့်တည့်အလယ်ဗဟိုသို့ရောက်နိုင်သည်။ swing check valves များသည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိနိုင်သော်လည်းကြီးမားသော check valves များသည်မကြာခဏ swing check valves များဖြစ်ကြသည်။ flush-toilet ယန္တရားရှိ flapper အဆို့ရှင်သည်ဤအဆို့ရှင်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပိတ်ထားသည့် tank tank ဖိအားကိုလက်နဲ့ရုတ်သိမ်းခြင်းဖြင့်ကျော်လွှားနိုင်သည်။ တင့်ကားများယိုစီးမှုနှင့်မြေထုဆွဲအားကြောင့်ခတ်ပြုတ်ကျသည်အထိဖွင့်နိုင်သည်။ ဒီယန္တရားရဲ့နောက်တစ်မျိုးကတော့ clapper အဆို့ရှင်ဖြစ်ပြီးမီးဘေးကာကွယ်ရေးနှင့်မီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစနစ်များမှာအသုံးပြုပါတယ်။ တစ် ဦး ကပတ္တံခါးဝစီးဆင်း ဦး တည်ချက်အတွက်ဖွင့်နေဆဲဖြစ်သည်။ clapper အဆို့ရှင်တွင်ရှေ့ဖိအားမပါသည့်အခါတံခါးကိုပိတ်ထားသည့် spring ရှိသည်။ နောက်ဥပမာတစ်ခုမှာ (မိလ္လာရေနုတ်မြောင်းစနစ်အတွက်) နောက်ရေအဆို့ရှင်သည်မိလ္လာရေပြန်လည်စီးဆင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောရေကြီးမှုမှကာကွယ်ပေးသည်။ ထိုသို့သောစွန့်စားရမှုသည်ပေါင်းစပ်ထားသည့်မိလ္လာစနစ်များနှင့်မိုးရေရေနုတ်မြောင်းစနစ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောသန့်ရှင်းသောရေနုတ်မြောင်းစနစ်များတွင်အများဆုံးဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၊ အရည်ပျော်ခြင်းသို့မဟုတ်ရေကြီးခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
Stop-Check Valve ဆိုသည်မှာစီး ၀ င်မှုရပ်တန့်ရန်နှင့်ဖိအားကိုမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူစီးဆင်းမှုကိုရပ်တန့်ရန် override control ဖြင့်စစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်ဖြစ်သည်။ နောက်ပြန်စီးဆင်းမှု (သို့) ရှေ့သို့ဖိအားမလုံလောက်ခြင်း (ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုအဆို့ရှင်အပြုအမူ) ကိုတုန့်ပြန်သည့်အပြင်အပြင်ဘက်ယန္တရားတစ်ခုမှတမင်တကာပိတ်ထားခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်စီးဆင်းမှုကိုမဆိုရှေ့သို့ဖိအားမပေးဘဲတားဆီးနိုင်သည်။
lift-check valve Check valve သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင် lift ဟုခေါ်သော disc သည်ထွက်ပေါက် (သို့) downstream ဘက်သို့စီးဆင်းရန်အတွက်ဝင်ပေါက် (သို့) အထက်စီးဖိအားမြင့်မားခြင်းဖြင့်၎င်း၏ထိုင်ခုံမှဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။ လမ်းညွှန်တစ်ခုသည် disc ၏ရွေ့လျားမှုကိုဒေါင်လိုက်မျဉ်းပေါ်တွင်ဆက်လက်ထိန်းထားသဖြင့်အဆို့ရှင်သည်နောက်ပိုင်းတွင်စနစ်တကျပြန်လည်နေရာချနိုင်သည်။ ဖိအားသည်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းမရှိသောအခါမြေထုဆွဲအား (သို့) အောက်စီးဖိအားမြင့်မားခြင်းက disc ကို၎င်း၏ထိုင်ခုံပေါ်သို့ကျစေပြီးပြောင်းပြန်စီးဆင်းမှုကိုရပ်တန့်စေသည်။
In-line စစ်ဆေးသောအဆို့ရှင် သည် lift valve နှင့်ဆင်တူသည်။ သို့သော်၊ အဆို့ရှင်ယေဘုယျအားဖြင့်ဤအဆို့ရှင်သည်အဆို့ရှင်၏အထက်ဘက်ခြမ်းတွင်ဖိအားရှိလျှင် 'lift' လိမ့်မည်။ နွေ ဦး စီးဆင်းမှုကိုကျော်လွှားရန်အဆို့ရှင်၏အထက်ပိုင်းဘက်ရှိဖိအားကို 'အက်ကွဲဖိအား' ဟုခေါ်သည်။ အဆို့ရှင်မှတဆင့်သွားသောဖိအားသည်ကွဲအက်သောဖိအားအောက်သို့ရောက်သောအခါ၊ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းပြန်စီးဆင်းမှုကိုကာကွယ်ရန်နွေ ဦး သည်အဆို့ရှင်ကိုပိတ်လိမ့်မည်။
duckbill အဆို့ရှင် သည်စီးဆင်းသောအဆို့ရှင်သည်စီးဆင်းသောအပျော့စားပြွန်မှတစ်ဆင့်စီးဆင်းသောဘက်သို့စီးထွက်သည်။ နောက်ပြန်ဖိအားသည်ဤပြွန်ကိုပြိုကျ။ စီးဆင်းမှုကိုဖြတ်တောက်သည်။
တစ် ဦး က pneumatic Non- ပြန်လာအဆို့ရှင် ။
မျိုးစုံစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင် စီးရီးအတွက်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ double check valve သည်စည်ပင်သာယာရေပေးဝေရေးလိုင်းများထဲသို့ပြန်လည်နစ်မြုပ်သွားခြင်းမှဖြစ်နိုင်ချေရှိသောညစ်ညမ်းသောရေကို backflow တားဆီးသည့်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ ပြောင်းပြန်စီးဆင်းမှုကိုပိတ်ဆို့သည့်အခါအပြုသဘောယိုစိမ့်ပိတ်ထားစေရန်သေချာစေရန်နှစ် ဦး ကိုဘောလုံးစစ်ဆေးမှုများအဆို့ရှင်နှစ်ခုလုံး၌တူညီသောကိုယ်ထည်တွင်ဘောလုံး / ထိုင်ခုံပေါင်းစပ်မှုများပါရှိသည်; နှင့်ပစ္စတင်စစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်များ, ၀ ိုင်ယာစစ်ဆေးရေးအဆို့ရှင်များနှင့်ဘောလုံး -and cone အဆို့ရှင်များ။
Check Valves ရေ Check Valves ကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင် သန့်ရှင်းရေးစစ်ဆေးရန်အဆို့ရှင်